သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အိမ်တွင်းအောင်းဖို့ | Duwun
အချိန်မရှိလို့ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အတိုးချကြည့်ဖို့ ဒီအချိန်က အချိန်ကောင်းပါပဲ။
Duwun စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ မကြာခင်မှာ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ရောက်တော့မယ်။ လောလောဆယ်ကလည်း Stay Home နေရတယ်ဆိုတော့ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ရှည်ကြီးကို ပျင်းပျင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းရတော့မှာပဲလို့ တွေးမိနေကြတယ်ဟုတ်!
အဲဒီလိုမတွေးဘဲ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာဂရုစိုက်ရင်း မိသားစုကိုလည်း အချိန်ပေးရင်း ဒီ ပိတ်ရက်ရှည်ကို ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင် ပျင်းချိန်တောင်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးတွေလုပ်တာ၊ စာအုပ်ဖတ်တာ၊ ပညာရေးအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းတက်တာ၊ မိသားစုနဲ့ အတူမုန့်တွေ လုပ်စားတာမျိုးလေးတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်တောင် အကျိုးရှိပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ ရုံးတက်၊ကျောင်းတက်လုပ်နေရတုန်းက အချိန်မရှိလို့ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အတိုးချကြည့်ဖို့ ဒီအချိန်က အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ရုပ်ရှင်အတိုးချကြည့်ဖို့အတွက် ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ မသိရင်တော့ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအစုံရှိတဲ့ CANAL+ ရုပ်သံလိုင်းမှာ ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ Canal + စက်တပ်ထားရင်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ပြီးတော့ ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထမင်းစားခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မလွတ်တမ်းကြည့်ဖို့လည်း မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ myCANAL Application သွင်းပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ Android ဖုန်းတွေအတွက် https://goo.gl/oncZGP မှာ
iOS ဖုန်းတွေအတွက် https://goo.gl/3WRAqN မှာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လက်တလော CANAL+ မှာ ပြသနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ အစီအစဉ်တွေကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။
GITA ရုပ်သံလိုင်းခွဲမှာတော့ Kpop Fan တွေအကြိုက် Fantastic Duo Season 2ကို ပြသနေပါတယ်။
ပြီးတော့ Mama Mia, Werewolf, Safe House စတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အက်ရှင် ရုပ်ရှင်တွေအပြင် သိုင်းကားကြိုက်သူတွေအတွက် သုံးပြည်ထောင်ရဲ့ အောင်နိုင်သူလို ဇာတ်ကားတွေလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
သားသားမီးမီးတွေနဲ့ အတူ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ပုံပြင်လေးတွေ၊ နာမည်ကျော် ကာတွန်းရုပ်ရှင်လေးတွေကိုလည်း CANAL+ CHA TATE နဲ့ CANAL+ PUTUTUE ရုပ်သံလိုင်းခွဲများမှာ ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ဟောလိဝုဒ် အက်ရှင်ကားများကိုလည်း CANAL+ ACTION ချန်နယ်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော် အားကစားနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Cage Warriors ပွဲစဉ်တွေအပြင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး နပန်းပြိုင်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ New Japan Pro Wrestling ပြဲမ်ားကို CANAL+ SPORTS လိုင်းခွဲမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ဦးမှာပါ။
လတိုင်းလည်း အဆင့်မြင့် မြန်မာရုံတင်ဇာတ်ကားကြီးများကို မပြတ်တမ်းပြသနေတဲ့ CANAL+ ZAT LENN ချန်နယ်လည်းရှိနေပါသေးတယ်နော်။
ကဲ CANAL+ ရဲ့ ရုပ်သံလိုင်းခွဲအစုံက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအစုံကို အိမ်တွင်းအောင်းရင်း ကြည့်ရှုဖို့ အခုကတည်းက To-do list ထဲ ထည့်ထားလိုက်တော့နော်! Duwun စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံး သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ကို မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ သင်္ကြန်အကြို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ Stay Home, Stay Safe!